Gịnị Mere Anyị Ga-eji Na-ekpegara Chineke Ekpere? Olee Ihe Ndị Anyị Nwere Ike Ikpe Ekpere Gbasara Ha?
Ihe Mere Chineke Ji Chọọ Ka Anyị Na-ekpegara Ya Ekpere
Chineke chọrọ ka gị na ya na-adị ná mma.
Ọ bụrụ na enyi na enyi ana-akparịta ụka, ha ga na-adịkwu ná mma. Chineke chọkwara ka anyị na-agwa ya okwu ka anyị na ya na-adịkwu ná mma. Ọ sịrị: “Unu ga-akpọku m, bịakwa kpekuo m ekpere, m ga-egekwa unu ntị.” (Jeremaya 29:12) Ọ bụrụ na ị na-agwa Chineke okwu, ị ‘ga-abịaru ya nso, yanwa ga-abịarukwa gị nso.’ (Jems 4:8) Baịbụl gwara anyị, sị: “Jehova nọ ndị niile na-akpọku ya nso.” (Abụ Ọma 145:18) Anyị na Chineke ga na-adịkwu ná mma ma anyị na-ekpegara ya ekpere.
“Jehova nọ ndị niile na-akpọku ya nso.”—Abụ Ọma 145:18
Chineke chọrọ inyere gị aka.
Jizọs kwuru, sị: “Ònye n’etiti unu ka nwa ya nwoke ga-arịọ achịcha—ọ gaghị enye ya nkume, ka ọ̀ ga-enye ya? Ma ọ bụ, ma eleghị anya, ya arịọ azụ̀—ọ gaghị enye ya agwọ, ka ọ̀ ga-enye ya? Ya mere, ọ bụrụ na unu maara otú e si enye ụmụ unu ezi onyinye . . . lee ka Nna unu nke nọ n’eluigwe ga-esi nye ndị na-arịọ ya ihe ọma karị!” (Matiu 7:9-11) N’eziokwu, Chineke chọrọ ka ị na-ekpegara ya ekpere n’ihi na ihe banyere gị “na-emetụ ya n’obi.” Ọ chọkwara inyere gị aka. (1 Pita 5:7) O kwudịrị ka ị na-akọrọ ya nsogbu gị. Baịbụl gwara anyị, sị: “Unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla, kama n’ihe niile, jirinụ ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike na inye ekele mee ka Chineke mara ihe unu na-arịọ.”—Ndị Filipaị 4:6.
E kere ụmụ mmadụ ka ife Chineke na-agụ ha agụụ.
Ndị ọkachamara n’ihe banyere otú ahụ́ mmadụ si arụ ọrụ achọpụtala na ikpe ekpere na-agụ ọtụtụ narị nde mmadụ agụụ, ọbụnadị ụfọdụ ndị na-ekweghị na Chineke dị na ụfọdụ ndị chere na mmadụ enweghị ike ịmata ma Chineke ọ̀ dị. * Ihe a gosiri na e kere ụmụ mmadụ otú ọ ga na-agụ ha agụụ ife Chineke. Jizọs kwuru, sị: “Obi ụtọ na-adịrị ndị maara mkpa ime mmụọ ha.” (Matiu 5:3) Otu n’ime ihe anyị ga-eme iji gboo mkpa a bụ ịna-ekpegara Chineke ekpere mgbe niile.
Olee uru ọ ga-abara anyị ma anyị na-ekpegara Chineke ekpere dị ka ọ gwara anyị ka anyị na-eme?
^ para. 8 N’afọ 2012, otu ụlọ ọrụ na-eme nchọpụta chọpụtara na n’Amerịka, ihe karịrị otu ụzọ n’ụzọ iri nke ndị na-ekweghị na Chineke dị na ndị chere na mmadụ enweghị ike ịmata ma Chineke ọ̀ dị na-ekpe ekpere, ọ dịkarịa ala, otu ugbo n’ọnwa.
Olee Ihe Ndị Anyị Nwere Ike Ikpe Ekpere Gbasara Ha?
Baịbụl gosiri na anyị nwere ike ikpe ekpere maka ihe ọ bụla gbasara anyị. Anyị nwere ike ikpegara Chineke ekpere iji:
Kwupụtara Ya Mmehie Anyị “Ekwupụtaara m gị mmehie m, ekpuchighịkwa m njehie m.”—Abụ Ọma 32:5.
Kelee Ya “Ọ dị mma ikele Jehova ekele.”—Abụ Ọma 92:1.
Nye Ya Otuto “M ga-agọzi Jehova mgbe niile; otuto ya ga-adị n’ọnụ m mgbe niile.”—Abụ Ọma 34:1.
Rịọ Ya Ka O Duzie Anyị “Mee ka m jee ije n’ụzọ nke ihe i nyere n’iwu, n’ihi na ọ na-atọ m ụtọ.”—Abụ Ọma 119:35.
Rịọ Ya Ka O Nye Anyị Ike “Chee ihu n’ebe m nọ ma meere m amara. Nye ohu gị ike gị.”—Abụ Ọma 86:16.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Ihe Mere Chineke Ji Chọọ Ka Anyị Na-ekpegara Ya Ekpere